1 Ahene 17 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Ahene 17:1-24
17 Ɛnna Tisbini Elia+ a ofi Gileadfo+ mu bɛka kyerɛɛ Ahab sɛ: “Sɛ́ Yehowa, Israel Nyankopɔn a migyina n’anim+ no te ase+ yi, obosu anaa osu rentɔ+ mfe yi mu gye sɛ makasa!”+ 2 Na Yehowa asɛm+ baa ne nkyɛn sɛ: 3 “Fi ha kɔ, na fa w’ani kyerɛ apuei fam kohintaw+ Kerit subon a ɛwɔ Yordan apuei no ho. 4 Subon no mu nsu na nom,+ na mɛhyɛ ma nkwaakwaadabi+ abrɛ wo aduan wɔ hɔ.”+ 5 Ntɛm ara na ɔkɔyɛɛ nea Yehowa kae+ no, enti ɔkɔtenaa Kerit subon a ɛwɔ Yordan apuei no ho. 6 Ná daa nkwaakwaadabi brɛ no aduan ne nam anɔpa, na anwummere nso wɔbrɛ no aduan ne nam, na subon no mu nsu na ɔnomee.+ 7 Nanso nna bi akyi no, subon no mu nsu yowee,+ efisɛ na osu ntɔ asase no so. 8 Ɛnna Yehowa asɛm baa ne nkyɛn sɛ:+ 9 “Sɔre kɔ Sarefat+ a ɛwɔ Sidonfo asase so na kɔtena hɔ. Hwɛ! mɛma ɔbea bi a ɔyɛ okunafo ama wo aduan wɔ hɔ.” 10 Ɛnna ɔsɔre kɔɔ Sarefat, na bere a oduu kurow no pon ano no, hwɛ! ɔbea kunafo bi a ɔrepɛ nnyina ni. Enti ɔfrɛɛ ɔbea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, fa nsu kakra gu ade mu ma me, na mennom.”+ 11 Bere a ɔbea no siim sɛ ɔrekɔfa aba no, ɔfrɛɛ no bio ka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, ɛyɛ a fa paanoo kakra+ hyɛ wo nsam brɛ me.” 12 Ɛnna ɔbea no kae sɛ: “Sɛ́ Yehowa, wo Nyankopɔn no te ase yi,+ minni paanoo+ biara; esiam nsa mã+ pɛ na aka wɔ kuku mu ne ngo kakraa+ bi a ɛwɔ ahina mu, na merepɛ nnyina kakra akɔyɛ biribi ama me ne me ba adi, na yɛawu.”+ 13 Ɛnna Elia ka kyerɛɛ no sɛ: “Nsuro.+ Wo de, kɔyɛ nea woaka no. Mmom di kan fa nea ɛwɔ hɔ no bi yɛ paanoo ketewaa bi brɛ me ansa+ na woayɛ bi ama wo ne wo ba no. 14 Na asɛm a Yehowa, Israel Nyankopɔn aka ni, ‘Esiam a ɛwɔ kuku mu no rensã, na ngo a ɛwɔ ahina mu no nso rensã kosi da a Yehowa bɛma osu atɔ agu asase no so.’”+ 15 Enti ɔkɔyɛe sɛnea Elia kae no; na ɔbea no nyaa aduan dii nna pii, ɔne ne fiefo ne odiyifo no.+ 16 Kuku no mu esiam no ansa, na ahina no mu ngo no nso ansa,+ sɛnea Yehowa nam Elia so kae no. 17 Na ɛbae sɛ nsɛm yi akyi no, ɔbea no, kyerɛ sɛ, ofiewura no, babarima yaree, na yare no mu yɛɛ den kosii sɛ afei de na ahome biara nni ne mu bio.+ 18 Ɛnna ɔbea no ka kyerɛɛ Elia sɛ: “O nokware Nyankopɔn nipa, dɛn na me ne wo wɔ yɛ?+ Woaba ha sɛ worebɛkae me me bɔne+ na woakum me ba.” 19 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ɔbea no sɛ: “Fa wo ba no ma me.” Na ogyee no fii ne kokom de no kɔɔ atifi dan+ a ɔte mu no mu, na ɔde no too ne mpa so.+ 20 Ɛnna ɔteɛɛm frɛɛ Yehowa sɛ: “O Yehowa, me Nyankopɔn,+ okunafo a mabɛsoɛ no yi, woreyɛ ɔno nso bɔne akum ne ba?” 21 Ɛnna obutuw abofra no so+ mprɛnsa, na ɔteɛɛm frɛɛ Yehowa sɛ: “O Yehowa, me Nyankopɔn, mesrɛ wo, ma abofra yi kra+ nsan mmra ne mu.” 22 Na Yehowa tiee Elia nne,+ enti abofra no kra san baa ne mu, na ɔbaa nkwa mu.+ 23 Ɛnna Elia faa abofra no fii atifi dan no mu baa fie no mu, na ɔde no brɛɛ ne maame; afei Elia kae sɛ: “Hwɛ, wo ba no te ase.”+ 24 Ɛnna ɔbea no ka kyerɛɛ Elia sɛ: “Afei na mahu sɛ woyɛ Onyankopɔn nipa+ ampa, na Yehowa asɛm a ɛwɔ w’anom no yɛ nokware.”+
1 Ahene 17